doraemon उद्धार मित्र
हेलोवीन रात मा, Nobita मित्र टोक्यो मा लाश पक्राउ गरिएको छ। उसलाई मित्र उद्धार र आफ्नो स्क्रिनमा सबै लाश उपस्थिति गोली मदत।
टम र जेरी गोली मार बेलुन
जेरी एउटा दूत, उहाँले उड र बेलुन गोली एक धनु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई सकेसम्म धेरै बेलुन गोली मदत छ।
barons गेट 2
यो खेलमा तपाईं आफ्नो मिशन धेरै महत्त्वपूर्ण छ कारण, आफ्नो साहस र क्षमता सबै आवश्यक हुनेछ। तपाईं kidnapped राजकुमारी सुरक्षित छ। तपाईं यस्तो सुन्दर साहसिक लागि तयार हुनुहुन्छ? पक्कै पनि तपाईं यो खेल प्रेम हुनेछ!
आफ्नो बाटो आउने सबै प्राणीहरू र शत्रुहरू मा बुलेट पठाउने जंगल मा सबै जाऊ। बाधाहरूलाई कूद र वन मार्फत धेरै गर्न सक्छन् तपाईं रूपमा अग्रिम
gangster Duel छडी
तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंले एक सरगना थिए भने, तपाईं के गरे? यो खेलमा, तपाईं सबै शत्रु नाश गर्ने तरखरमा छ जो एक छडी मानिस, कृपया यो खेल मा सबै स्तर समाप्त छन्।
यो Doraemon श्रृंखला खेल को मजा खेल हो। Nobita उड र सबै Doraemon baloons गोली तीरंदाज प्रयोग मद्दत गर्नुहोस्।
अझै पनि जीवित खेल
एक रोमाञ्चक खेल जहाँ तपाईंले आफ्नो घर कब्जा गर्न प्रयास गर्दै जो सबै लाश मार्न छ। त्यसैले, बस एक बन्दूक लिन र आफूलाई बचाउन। धेरै होसियार र ध्यान दिएर हुन! भाग्यले साथ दिओस्!
टम र जेरी कौशल तीरंदाज
मदत जेरी टम को टाउको मा एक स्याउ शूटिंग द्वारा धनुविद्या अभ्यास, किनकी तपाईं टम मारा सक्छ सावधान।
phineas र ferb विदेशी गोली
को insland मा, धेरै परदेशी छन्, Phineas AMD Ferb सबै परदेशी गोली मार गरेर यो insland rescure छ। तिनीहरूलाई यो मिशन पूरा सहयोग गर्नुहोस्।
आकाशगंगा विदेशी ठाउँ जहाजहरू एक गिरोह द्वारा आक्रमण हो। यो ग्यालेक्सी रक्षा र आक्रमण रोक्न तपाईं सम्म छ। तपाईं strategical अंक मा टावर र तपाईं नवीनतम प्रविधि तिनीहरूलाई अपग्रेड निश्चित छ। तपाईं देखाउन कसरी हुनेछ
stickman अन्तिम मिशन
यो Stickman को अन्तिम मिसन छ, उसलाई सडक मा सबै शत्रु गोली र सबै वस्तुहरू सङ्कलन गर्न मद्दत गर्छ।
नियमित शो प्रेत गम्भीर
मोर्दकैले गोली स्पेस पल्ट प्रयोग गरेर गम्भीर सबै लाश आगो मद्दत गर्नुहोस्।
stickman जंगली पश्चिम
तपाईँको माउस प्रयोग गरेर सबै Stickman यो सहरमा देखा गोली। गरेको हामीलाई साथ जाने गरौं।
बिजुली rex गाढा दिन
Rex यस शहर मा सबै लाश गोली मद्दत गर्नुहोस्।